काठमाडौं । माओवादी जनयुद्धका क्रममा ७ बर्ष जेल परेका तिलक शर्माले चार बर्ष पहिले गज्जबको योजना सुनाए । सादगी नेताको छबी बनाएका बर्दियाली नेता शर्मा पूरा आत्मबिश्वासका साथ भन्दै थिए –केरा खेती गर्ने, ०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा लागेको ऋण पनि तिर्ने र स्थानीय पनि भइ टोपल्ने । बाग्लुङबाट बर्दिया बसाइ–सराइ गरेको ४० बर्ष बितेपनि उनलाई बर्दियामा पयर्टक उम्मेवारका रुपमा हेरिएको थियो । भूमीगत राजनीति र जेल जीबनका कारण उनको सार्वजनिक छबी बन्न सकेको थिएन ।
नभन्दै, सदरमुकाम गुलरिया नजिकै जग्गा भाडामा लिएर शर्माले केरा खेती थाले । जीबनभर श्रम र श्रमिकका कुरा गर्ने तर श्रम फिटिक्कै नगर्ने ‘कमाउनिष्ट’हरुको भीडमा उनी कम्युनिष्ट हुन हौसिएका थिए । होष्टेमा हैंसे गर्न क्यामरासहित म उनको केराबारी पुगेँ । हर्लक्क हुर्केका केराका खाम देखाउँदै उनले दामको आँकलन गर्न भ्याए–यसपाली कम्तिमा ६ लाख उब्रिएला ।
नेपालमा केरा खेती राम्रो हुन्छ । हावापानी सुहाउँदो भएकाले खेती गर्न खाशै कठीन छैन । कठीन छ त बजार पाउन । अधिकाँश कृषकसँग आफ्नो जमीन छैन । जमीन भाडामा लिँदा देखि खर्च शुरु हुन्छ । भरपर्दो सिचाइँ छैन । बिद्युतीय सिचाइँको भर पर्नुपर्छ । बिजुली यात छैन, भएपनि महँगो छ । मल महँगो छ । मजदुर पाइँदैन, पाइहाले पनि टिक्ने र भरपर्ने मजदुरी छैन । सरकारी योजना खेतसम्म पुग्दैन । जसोतसो गरेर केरा फल्छ । तर, बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्र छैन । बजारमा पुर्याएर पनि हाम्रो केरा बिक्रि हुँदैन ।
बिचौलियाको भर नपर्ने निधो गरियो । आफैँ बेच्ने सुर कसियो । तर, बेच्नु कसरी ? कालीमाटीको कृषकमारा जालो तोड्न नसकिने रैछ । तेस्रो दिन काठमाडौँमा भुकम्प गइगो । त्यसपछि बन्दाको पछि को लागोस ! बन्दा भुकम्प पीडितलाई दिने निर्णय गरियो ।
नाफा कमाउन नसकेर बाँड्न लागिएकाले धर्म गरिएको उत्साह हामीमा थिएन । चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी जस्तो भएको थियो । अन्यथा, दुई लाख बराबरको बन्दा दान गरेको भन्दै नायक बन्थे दाइ । सहनायक बन्ने मौका मेरोपनि थियो । उनले लोभ गरेनन् । बिचरा, फर्कने भाडासमेत उनीसँग थिएन । स्वर्गवासी माल्दाइलाई सम्झेर यो सन्दर्भ लेख्दा मेरा आँखा रसाएका छन् ।
ओलीलाई नेता बनाउन कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यकर्ताभन्दा बाहिरका पंक्तिको मुख्य भूमिका छ । आफ्ना नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला अलिकति उकासिउँ भन्ने अपेक्षा धेरैजसो कार्यकर्तामा हुनु स्वभाविक हो । अहिले सबैभन्दा खतरा ओलीजीका लागि यही आशा हो । यो आशा पूरा गर्नकै लागि बजेटको बिनियोजन भएका दृष्टान्त अनेक छन् । आफ्नै साँसदहरुलाई बजेटको बिरोध नगर्न प्रधानमन्त्रीले ह्रवीप जारी गरेको सन्दर्भ यसैको प्रमाण हो । साँसदको मुख थामिएला, किनकी भोलिको राजनीति जिवित राख्नु छ । तर, राजनीतिक लाभहानीको हिसाव नराखी ओलीजीको काँध थापेका लाखौँलाई ओलीजीको बोली कम्तिमा पनि अब काफी छैन । कामै चाहिएको छ ।